market(market) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । आज नेप्से परिसूचकमा कारोबार खुलेको २ घन्टामै साढे ७१ अंकको हाराहारीमा उछाल आएको छ। यो अवधिमा १७ वटा कम्पनीको सेयरमूल्यमा उछाल आएर पोजेटिभ सर्किट लागेको छ। उच्च कमाउने १० कम्पनीमा ७ कम्पनी लघुवित्त समूहकै छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से परिसूचक ७१.४६ अंकको बढोत्तरीका साथ २०७१.८६ को उचाइमा पुगेको छ। राम्रा र बलिया...
बजार खुल्नासाथ नेप्सेले तोड्यो ‘अलटाइम हाई’ रेकर्ड, बनायो नयाँ कीर्तिमान
काठमाण्डौ । आज धितोपत्र बजार खुल्नासाथ नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक उचाइ चुमेको छ। परिसूचक १९.९७ अंकले बढ्दै १८९४.९७ विन्दुमा पुगेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो। योसँगै यसअघि सन् २०१६ जुलाई २७ (२०७३ साउन १२ गते) मा परिसूचकले कायम गरेको अलटाइम हाई रेकर्ड ब्रेक भएको छ। उक्त दिन परिसूचक १८८१.४५ को विन्दुमा पुगेको थियो। जुन हालसम्मकै उच्च...
सेयर बजारको आकार रु. २३ खर्ब नाघ्यो, अझै बढ्ला ?
काठमाण्डौ । सेयर बजारको आकार २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। तिहार बिदाअघि खुलेको धितोपत्र बजारमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको कुल बजार पुँजीकरण २३ खर्ब २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हो। गत कात्तिक २६ गते बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको कुल बजार पुँजीकरण २२ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। गत बिहीबार...
काठमाण्डौ । दसैैँबिदा हुनुअघिको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहीबार नेप्से परिसूचक १६ सय विन्दु माथि उक्लेको छ। आज नेप्से परिसूचक ८.५४ अंकको बढोत्तरीका साथ १६ सय विन्दु माथि उक्लेको हो। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १.९१ अंकको वृद्धिका साथ ३१८.५६ को उचाइमा पुगेको छ। आज कारोबार रकमसमेत २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भएको...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार नेप्से परिसूचकको दोहोरो अंकको वृद्धिसँगै कारोबार रकमसमेत पौने २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भएको छ। आजे नेप्से परिसूचक १३.९४ अंकको बढोत्तरीका साथ १५.९७.७१ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ३.१० अंकको बढोत्तरीका साथ ३१६.६५ को उचाइमा पुगेको छ। हिजो...
तीन घन्टा नबित्दै १४ कम्पनीको सेयरमूल्यमा सर्किट, कारोबार रकम रु. ८५ करोड नाघ्यो
काठमाण्डौ । यो साता पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से इन्डेक्समा उछालसँगै १२ वटा कम्पनीका सेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अहिलेसम्म ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ । कारोबार सुरु भएको ३ घन्टा नहुँदै गत शुक्रबारको तुलनामा नेप्से इन्डेक्स ३१.५५ अंक (२.६० प्रतिशत) को बढोत्तरी १२४८.७५ को विन्दुम पुगेको छ । सेन्सेटिभ...